Ahoana ny famaritana ny Maât - Afrikhepri Fondation
Ahoana ny famaritana ny Maat
Lhoy izy hoe Maât, amin'ny fiteny israeliana dia ampiasaina amin'ny fanamarihana, fahamarinana, fahamarinana, mahitsy, fifandanjana ary filaminana. Io fitsipika io dia tandindon'ny vehivavy manana sandry elatra. Mifanohitra amin'izany ihany koa ny teny "Isfet", izay midika hoe tsy fahamarinana, lainga, fitsiririhana, fanararaotana sns.
Ny niandohan'ny Maât
Ny fiorenana ara-tsosialy sy ara-tsosialy ao Maat dia manomboka any Afrika mainty amin'ny vanim-potoana alohan'ny faran'ny taona 4 000 - 3 500 av. JC., Tamin'ny fotoana mbola tsy nisy ny firenena Ejyptiana (ambony sy ambany an'i Ejipta). Ny fanambarany dia hitranga amin'ny fandresena ny mpanjaka Sodane Narmer. Ankehitriny dia misy ny tena zava-misy 5 sy ny 5 ny Maat: Dimension Realities
Fivavahana Ny fivavahana dia masina
Maat amin'ny endriny ara-pivavahana
Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra i Maat, dia tsy maintsy mandinika izany amin'ny sehatry ny teolojia. Satria ny teolojia dia ny siansa momba ny fianarana an'Andriamanitra.
Maat amin'ny endriny kosmika
Maat dia mifandray mivantana amin'ny SUN, ny STARS, ny MOON etc. Amin'ny endriny kosmika izay manana endriky ara-pivavahana ihany koa, dia manambara fa ny masoandro sy ny kintana dia mety manana endrika ara-pivavahana ihany koa. Ny Farao izay tompon'andraikitra amin'ny fihetsika ho an'i Maat dia antsoina amin'ny anarana hoe "SA RA", ilay "zanaky ny masoandro" (midika hoe Andriamanitra).
Ny lafiny ara-politika-cosmic an'i Maat
Ny politika, izay manasongadina ny rafitry ny fireneny Ejiptiana dia manana ny endriky ny cosmic. Ohatra iray amin'izany ny governemanta pharaonic. Izany no antony iantsoan'ny "SA RA" ny Farao, izay manodidina ny andrim-panjakana isan-karazany. Izany dia maneho ny lafiny masina amin'ny governemantan'i Kemet.
Fomba ara-pivavahana an'i Maat
Midika izany fa ny fiarahamonina kemetic dia nanana filamatra ara-pinoana mba hanoratana ny filaharana sosialy. Midika koa izany fa nanome ny lamosin'ny fiaraha-monina ny Kamites.
Ity tatitra ity dia heverina ho anthropologie ara-pinoana: izay amin'ny lafiny maro dia maneho ny Siansa vaovao. Satria tsy anthropology fotsiny ianao, fa koa "anthropology ara-pinoana. Satria tsy maintsy nandany fotoana ny fianarana mba hanodidina an'i Maat amin'ny fomba amam-pivavahana. Izany hoe, tany Egypta, ireo Afrikana fahiny dia nanamafy fa manana divay (soul) avy amin'Andriamanitra ny olona, ​​toy ny ka sy Ba. Ary ireo fanahy fanampiny ireo dia ny mamorona ny saina.
Maat, manana fifandraisana amin'ny masina na amin'Andriamanitra, dia nanan-tarehy ihany koa. Antsoina koa hoe "endriky ny cosmic of God. "
Ny endriky ny cosmic Maat na ny cosmos Maat, dia ny fandalinana ny cosmology: Ny Cosmology dia ahitana astronomy, fizika, matematika sns. Zava-dehibe ny fahatakarana izany mba hahatakarana ny natiora, izao rehetra izao, izao tontolo izao, ny cosmos - tsy maintsy fantatrao aloha ny siansa etsy ambony. Ary toy izany koa i Maat dia ny fandalinana ny siansa manerantany.
Maat amin'ny lafiny Cosmic amin'ny fanjakana
Na ny faraidron'ny tarika fara-tampony aza dia nanana endriky ny cosmic. Tsy hoe sehatra ara-pivavahana ihany, fa ny habaka iray misy an'izao rehetra izao. Noho izany, i Farao dia tsy governoran'ny fanjakana, fa izy ihany koa tompon'andraikitra tamin'ny tontolo rehetra. Satria ny fanjakana dia an'i Maat. Noho izany dia azo lazaina hoe cosmic koa ny mpanjaka.
Ny fiarahamonina Ejiptiana ihany koa dia manana ny endri-tsariny amin'ny endriny noho ny Maat miaraka amin'ny fombam-pivavahana. Ary noho izany fahalalana sy fahatakarana izany, dia mitondra any amin'ny olombelona tsy mety maty sy ny fahazavan'izao tontolo izao. Tany Ejipta, nino izy ireo fa tsy maty ny olona fa lasa ampahany amin'ny habakabaka eran-tany. Izany no dikan'ny tsy fahafatesana tany Ejipta fahiny. Fa ianao no voatendry ho anisan'ny habakabaka maha-olombelona an'izao tontolo izao.
Ny lafiny ara-politika ny Cosmos
Izany no endrika ara-cosmika sy ara-politika an'ny Fanjakana Pharaon izay manondro ny olombelona. Izany dia mianatra ao anatin'ny sehatry ny siansa politika ao amin'ny faritr'i Fianaron.
Ny refy politikan'i Maât dia nantsoina hoe "JA-TI", izay tandindon'ny fitantanana azy. Ny fitantanan-draharaha, napetraka teo ambanin'ny fahefan'ny praiminisitra, dia matetika no notarihin'ny mpanjaka, izay lehiben'ny mpitantana ny fanjakana na ny firenena. Izy no tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fanjakana, izany hoe ny Neily, ny loharano ary ny fizarana loharano. Ny fiarahamonina amin'ny lafiny ara-politika mahakasika an'i Ma'at dia tsy hoe ara-pinoana na ara-politika ihany fa koa ny cosmic.
Ny olombelona amin'ny lafiny politika, miankina tanteraka amin'ny fanjakana. Tsy nisy revolisiona tany Ejipta satria te hanohitra ny fanjakana, tsy maintsy nanohitra ny Andriamanitra ianao. Noho izany, ny tsirairay dia nankatò ny fanjakana. Tsy misy revolisiona, tsy misy herisetra, sns ... satria mitarika tsy fandriam-pahalemana izany, ary manohitra an'i Maat. Tsy nisy ny herisetra satria nandrava ny didin'Andriamanitra, ny lamina ara-politika, ny filaminana ara-pivavahana sy ny lamina ara-pôlitika io hery Sethian io.
Miaraka amin'ny Maat dia manana endriny ara-tsosialy ihany koa ny divinin'Andriamanitra. Ny fitondran-tena, ny fitondrantena ary ny fanajana ny soatoavina dia takiana amin'ny andriamanitra rehetra. Izany no lafiny ara-tsosialin'Andriamanitra momba an'i Ma'at. Ireo soatoavina ireo dia azo antoka avy amin'ny andriamanitra eo amin'ny fiainam-piarahamonina. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy afaka mahazo ny soatoavina ara-môraly amin'ny alàlan'ny vintana ianao. Tsy maintsy avy amin'Andriamanitra izay mandray anjara amin'ny fiaraha-monina izy ireo. Mety hitranga amin'ny fihetsiky ny lehilahy sy ny fifandraisany amin'ny hafa izany. Ny hetsika ara-tsosialin'ny fizotry ny cosmic dia ny fihetsika. Ny fihetsiketsehana rehetra dia manana ny endriky ny cosmic.
Ao amin'ny fari-piaraha-monina ara-tsosialy, ny Mahera ao Ejipta, dia tsy maintsy miaro ny firenena. Noho izany, rehefa mandia ady izy, dia tsy tokony handresy ny tany hafa, fa handroaka ireo fahavalo matanjaka ao Maat, lavitra an'i Afrika. Tsy tokony hanangona olon-kafa koa izy. Tsy maintsy niaro an'i Afrika tamin'ny korontana izy. Noho izany dia nanatanteraka ny sitrapon'i Maat izy ireo tamin'ny fiarovana ny firenena.
Fikambanana amin'ny maha-sosialy ny Maat (fantatra koa amin'ny hoe sosiology).
Ny olona ao amin'ny toetrany sosialy, raha ny mikasika an'i Maat, dia tokony hanana fahatsapana fiarahamonina amin'ny endrika firaisankina. Ny firindrana ara-tsosialy dia tokony hisaina araka ny Maat. Mijanona eo anoloan'ny Maat, tompon'andraikitra amin'ny fiarahamoninao.
Refy antropolojika masina an'i Maât; satria misy resaka lehilahy. Tany Egypt, dia nino fa tsy misy afaka mahalala an'Andriamanitra. Ny refy antropolojikan'Andriamanitra hitan'ny Afrikanina taloha dia Anthropomorphic. Izany hoe, raha ny fahitan'izy ireo dia Andriamanitra anthropomorphic Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, omenao ny andriamanitrao ny endrikao. Ireo andriamanitra rehetra dia anthropomorphic. Midika izany fa mamorona an Andriamanitra amin'ny endrinao ianao. Ity no refy antropolojian'ny Maât momba ny masina.
Ny endriny anthropologique ny cosmos rehefa mahakasika Maat
Ny Kamites dia nilaza fa ny fahafatesana, ny fiainana, ny fahanterana, sns dia tranga tsy fahita. Izy io dia tafiditra ao anatin'ny fizotran'ny kosmika. Izay no antony tsy natahorany ny fahafatesana. Nino izy ireo fa ny fahafatesana dia ampahany amin'ny fizotran'ny kosmika amin'ny fampidirana fotsiny.
Ny endriny nentim-paharazana an'i Maat mifandraika amin'ny Fanjakana
Ny fanjakana dia manome ny lafiny rehetra amin'ny fiainana amin'ny olombelona. Na amin'ny fahafatesana aza. Ohatra, ny fanjakana dia tompon'andraikitra amin'ny fombafomba fandevenana.
Fampiroboroboana antenimieran'ny fiarahamonina mifandraika amin'ny Maat
Ny fahatsiarovam-bahoaka, ny fahatsiarovan-tena. Midika izany fa tokony ho fantatrao ny ray aman-dreninao, ny fianakavianaorreny, ny razambenao. Tena zava-dehibe ho an'i Maat izany. Tokony hanana fahatsiarovana ara-kolontsaina ianao. Tsy maintsy mampifandray anao amin'ny Maat izany.
Tsy misy ny fanajana an'i Maat raha tsy misy azy. Tsy maintsy manana fahalalana momba ny soatoavinao, ny artinao, ny fiteninao, ny kolontsaina sns ianao. Izany no mahatonga ny dimension antropolojika amin'ny maha-olombelona dia tena siansa vaovao. Noho ny Maat. Noho izany dia misy ny siansa marobe ao amin'ny famonoana an'i Maat. Maat's Sociology, Maat's Theology, Maat's Cosmology.
Maimainty tsara tarehy
Ny hatsarana koa dia nivavaka teo ambany Maat, izay nantsoin'izy ireo hoe "Neferu". Arts, architecture, varotra, sns. Tokony ho tsara tarehy tao Kemet noho ny Maat.
Nisy ny fitsaboana Maatic koa
Nampiasa herisetra tao amin'ny pharmacologie izy ireo. Nefa tsy maintsy manana habaka cosmika ireo zavamanitra alohan'ny hahafahan'izy ireo ampiasaina hanasitranana. Amin'ny teny hafa; Ny fisian'ny zavamaniry sasany dia mifototra amin'ny toeran'ny masoandro na ny volana amin'ny fotoana iray. Na rehefa any an-danitra ny "kintana Sirius". Na voangom-bokatra amin'ny alina amin'ny fotoana iray. Izany dia ny halebeazan'ny cosmic momba ny pharmacology.
Misy ihany koa ny fiantraikany ara-tsosialy sy ara-pahasalamana ao Maat. Ny vavaka sasany na ny fihirana na ny fahafahana homena ireo razambe amin'ny endriky ny lahateny tsara nangatahana fanampiana dia nampiasaina hanasitrana ny marary ihany koa.
Ny mariky ny Maat dia ilay volo izay tena maivana, saingy mety ho mavesatra noho ny zavatra rehetra nolazainay. Ma'at dia fifandanjana sy fahazavana. Ny fampiharana ny Maat eo amin'ny sehatra sosialy dia ny fananana firaisankina mavitrika. Mitadiava olon-kafa. Ankoatra ny firaisankinan'ny fiarahamonina.
Maat ho an'ny tanjona fampianarana amin'ny KMT fahiny
Ny dingana voalohan'ny Maat amin'ny fampianarana dia ny tsy maintsy ianaran'ny lehilahy hihaino amin'ny toerana voalohany. Nantsoin'izy ireo hoe "OMO". Ary rehefa miteny ianao, ny feonao dia tokony ho "marina". Izany no niantsoana azy ireo, miresaka amin'ny (MAA-ERU).
Maat amin'ny endriny pharaonic
Ny famaritana azy dia (mpitarika ny hetsika), i Farao dia tompon'andraikitra amin'ny fepetra rehetra nomena ny herin'Andriamanitra (Andriamanitra) mba hiarovana ny fanjakana.
Amin'ny alalàn'i Maat no ahafahantsika manova ny tenantsika, hanavao indray ny baikon'ny afrikana vaovao sy Pan-Afrikana. Andao hiara-mandeha amin'i Maat eo amin'ny fiainantsika ho fananganana fahitana vaovao, fanantenana vaovao, tontolo vaovao ary ezaka ara-panahy vaovao ho an'ny Afrikana rehetra.
Fanadinadinana nataon'i Richard Fields ary nadikan'i Jean-Philippe Omotunde
TREAT ANY MAS
2 vaovao avy amin'ny € 22,00
1 ampiasaina amin'ny € 27,86
Vidio € 22,00
Nohavaozina farany tamin'ny 18 Jona 2021 12:05 hariva
Ny fanambin'ny fanovana - Documentary (1984)
Ny kosmogony iounou avy amin'i Ejipta fahiny (mainty)
Hery sy Fampihorohoroana - Rakitra fanadihadiana (2003)
Omena ny fanirianao (Audio)
Ny vehivavy Kenyan dia miasa amin'ny famolavolana hery afrikanina amin'ny Internet